योजक निर्माण: सबै चीजहरू तपाईलाई यस प्रविधिको बारेमा जान्नु आवश्यक छ नि: शुल्क हार्डवेयर
योजक निर्माण: सबै चीजहरू तपाईलाई यस प्रविधिको बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दछ
La additive विनिर्माण यो कहिलेकाँही थ्रीडी प्रिन्टिंग टेक्निकको साथ भ्रमित हुन्छ। र यो त्यो हो, तिनीहरू उही जस्तो देखिन्छ यदि तपाईं तिनीहरूको विवरण हेर्नुभयो भने, वा थ्रीडी प्रिन्टि itself आफैलाई एक थपन मद्दत गर्ने टेक्निकको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ।
हुन सक्छ यो हुन सक्छ, यहाँ तपाईं समानता, भिन्नता र बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाइँ सबै जान्नु आवश्यक छ सामग्रीको लेयरमा लेयर थपेर तीन आयाममा वस्तुहरू सिर्जना गर्न यस प्रविधिमा।
1 के यो थ्रीडी प्रिन्टिंग जस्तै हो?
2 योजक उत्पादन भनेको के हो?
3 उत्पादन प्रक्रियाका लागि के आवश्यक छ?
के यो थ्रीडी प्रिन्टिंग जस्तै हो?
La 3D मुद्रण घरेलु थ्रीडी प्रिन्टरहरूको साथ घरमा घरमा थप उत्पादन मद्दत प्रविधिको लोकप्रिय छ, र उद्योगमा पनि, जहाँ यो क्रान्ति गर्न आउँदछ वस्तुहरू अहिले निर्माण गरिएको तरिकामा।
जे होस्, थ्रीडी प्रिन्टिंग भने योजक उत्पादन प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्, सबै योजक उत्पादन थ्रीडी प्रिन्टिंग मानिदैन। यो जहाँ ठूलो अन्तर छ।
यदि तपाइँ थ्रीडी प्रिन्टरले कार्य गर्ने तरिकामा हेर्नुहुन्छ भने, तपाइँले देख्नुहुनेछ कि यसले छवि मार्फत प्रिन्ट हुन फाइलको माध्यमबाट मोडेल प्राप्त गर्दछ। यस डाटाबाट, यसले आफ्नो टाउको सार्नेछ तह द्वारा तह थप्नुहोस् र यसले शून्यबाट अन्तिम टुक्रा नभएसम्म भोल्युम लिइरहेको छ।
अरूबाट धेरै फरक परम्परागत प्रविधि थ्रीडी पार्ट्सहरू सिर्जना गर्न, जस्तै मोल्डहरू, मसिनि etc., आदि। जहाँ सीमित जटिलताको केवल अंशहरू मात्र उत्पन्न गर्न सकिन्छ, जबकि थप टेक्नोलोजीमा धेरै जटिल ज्यामितिहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ, सरल टुक्राहरूबाट निर्माण गर्न, अन्ततिर नयाँ सम्भावनाहरू खोल्न, थ्रीडी प्रिन्टिंगको प्रयोग गरेर घरहरू निर्माण गर्दै ...
योजक उत्पादन भनेको के हो?
La additive विनिर्माण यसले धेरै प्रविधिहरू समाहित गर्दछ, ती सबैमा केही सामान्य चीजहरू छन्, र त्यो हो कि अन्तिम परिणाम प्राप्त नभएसम्म प्रक्रियामा अलि अलि गर्दै यसलाई "थपिएको" हुन्छ। प्राविधिक विधिहरू मध्ये:
प्रत्यक्ष डिजिटल निर्माण
त्यसकारण, यस प्रकारको टेक्नोलोजीको अनुप्रयोगहरू असीमित छन्। सुरुमा उनीहरूले उत्पादन मोडेलहरूको द्रुत प्रोटोटाइपमा ध्यान केन्द्रित गरे, र हालसालै यो औषधि, एयरोस्पेस, फेशन, आदिबाट सबै प्रकारका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा लागू भइरहेको छ।
Additive निर्माण अवधारणा प्रयोग गरीएको छ व्यावसायिक र विशेष वातावरणहरू, तर सँधै सामग्रीहरूको तह द्वारा लेयर थप्दै वस्तुहरू सिर्जना गर्ने प्रविधिहरूको सन्दर्भ गर्दछ, यसको लागि प्रयोग गरिएको टेक्नोलोजीमा नजाईकन। न त भौतिक पदार्थले नै फरक पार्दछ, यो प्लास्टिक, जैविक कपडाबाट धातु, संयोजन, आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उत्पादन प्रक्रियाका लागि के आवश्यक छ?
सक्षम हुन प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् योजक निर्माणको लागि, निम्न आईटमहरू आवश्यक छन्:
एक PC जहाँबाट भाग वा मोडेल निर्माण गर्न सकिन्छ।
आवश्यक थ्रीडी मोडेलि software सफ्टवेयर, वा CAD।
योजक निर्माण उपकरणहरू, जे भए पनि।
लेयरिंगका लागि सामग्री।
जब थ्रीडी वा सीएडी मोडल सिर्जना गरिन्छ, र निर्माणको लागि पठाइन्छ, थप्न मद्दत गर्ने उत्पादन टोलीले आवश्यक आयाम र आकार डाटा पढ्नेछ र भागहरूको क्रमिक तहहरू थप्नेछ। तरल, पाउडर वा पग्लिएको सामग्री मोडेल बनाउन।
जब पग्लिएको सामग्री प्रयोग गरिन्छ, यसलाई पुन: सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, जस्तो कि थ्रीडी प्रिन्टरहरूबाट प्लास्टिकको रूपमा हुन्छ जुन एक्सट्रूडरहरूमा पिघलिन्छ। त्यसो भए कडा हुन्छ। तपाईं तरल पदार्थ वा रेजिनहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन त्यसपछि युभी उपचार, अनीलिंग, आदि, वा धातु पाउडरको प्रक्रियामा आधारित हुन्छ र त्यसपछि बेकिंगद्वारा फ्यूज हुन्छ ...
उदाहरण को लागी, ती पीएलए वा एबीएस बाट प्रयोग गर्न सकिन्छ प्राकृतिक फाइबर, धातु मार्फत, क concreteक्रीट, आदि। सम्भावना धेरै छन्.
थप उत्पादन प्रविधिहरू, जस्तै थ्रीडी प्रिन्टि already, पहिले नै धेरै क्षेत्रहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। को अनुप्रयोगहरू तपाईंले कल्पना गर्न सक्ने भन्दा बाहिर जानुहोस्। केहि उदाहरणहरू:
खानाको लागि मुद्रित मांसको मुद्रण।
चिकित्सा क्षेत्रका लागि जीवित अंगहरू वा ऊतकोंको मुद्रण।
संरचना र घरहरू कंक्रीटको साथ मुद्रित।
प्रतिस्पर्धा, एयरोडायनामिक र मेकानिकल भागहरू सिर्जना गर्न मोटर्सपोर्टको रूपमा अहिले सम्म असम्भव छ। F1 टोलीहरूले पनि आफ्ना प्रिन्टरहरूलाई ट्र्याकमा साना सानो एरोडायनामिक भागहरू छाप्न लिन्छन्।
शल्य चिकित्सा, ओर्थोपेडिक्स, एनाटॉमिकल मोडेलहरू इत्यादिको रूपमा तत्त्वहरूको रूपमा इम्प्लान्टहरू वा मेडिकल प्रोस्थेसिसहरूको सिर्जना।
एयरोस्पेस क्षेत्र जहाँ फंक्शनल प्रोटोटाइप वा जहाज र हवाइजहाजको एरोडायनामिक्सका लागि अंशहरू सिर्जना गरिन्छ।
मोटर वाहन उद्योग, सबै प्रकारका भागहरू सिर्जना गर्न।
अन्य उद्योगहरू नयाँ कार्य उपकरणहरूबाट निर्माण गर्नका लागि, अन्य मोडेलहरूमा जुन अघिल्ला विधिहरू द्वारा सिर्जना गर्न सकिएन।
फेसन, केहि आईटमहरू उत्पादन गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » योजक निर्माण: सबै चीजहरू तपाईलाई यस प्रविधिको बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दछ
एसएमडी वेल्डिंग: यस मोडिलिटीको सबै रहस्यहरू